Dhageyso:- Fartuun oo markii labaad la talaalay kana hadleysa wixii ay dareentay Talaalka kadib Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDhageyso:- Fartuun oo markii labaad la talaalay kana hadleysa wixii ay dareentay Talaalka kadib
March 2, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Warka ugu akhriska badan 0
Norway ayaa wada talaalka Corona waxana Talaalkaasi qaatay dad badan oo Somali ah inkastoo somalida badankeeda ay u arkaan in Talaalka uu dhibaato keeni karo.
Somalida oo kaliya maahan dadka sidaasi aamisan waxaa jira Dad kale ajaanib iyo dhalad ah kuwaasi oo talaalka wali aan si sax ah u fahmin.
Faruun Maxamed oo kamid ah Somalida Oslo ku nool ayaa qaadatay talaalka labadiisa iyadoo qeybta labaad qaadaneysa ayay la hadashey qeybta wacyi galanti ee Oslo Komuune iyo warbahitna Norsom news ay iska kaashanayaan waxayna sharaxeysaa waxa ay dareemeyso.
Halkan Hoose ka Dhageyso Fartuun.
Maahan Fartuun oo kaliya dadka is talaalay waxaa jira Somali kale oo istalaalay kuwaasi oo talaalka qasab ku yahay madama ay ka shaqeeyaan goobo Caafimaad una nogulyihiin xanuunka Corona.